watchOS 5 uye tvOS 12 beta 5 dzakaburitswawo nezuro kune vanogadzira | Ndinobva mac
Nezuro masikati ese ma beta shanduro dzakasiyana dzeApple OS dzakatangwa, mune iyi mamiriro matsva anoita kunge asinga wedzere kuwanda kwekushongedza kana kwekushandura shanduko, asi sezvatinogara tichitaura muzviitiko izvi zvakakosha kugadzirisa iyo maduku madiki anoonekwa mune dzeshanduro dzakapfuura uye polisha iwo madhaidhi enguva yekuburitswa zviri pamutemo.
Iyo itsva betas yewatchOS 5 uye tvOS 12, yakabva paruoko rweMacOS Mojave neIOS 12. Zvinotarisirwa kuti mumwedzi waNyamavhuvhu imwe vhezheni ye beta inogona kusvika, asi musimboti. hatisi kure neshanduro dzekupedzisira.
IOS beta ine ruzivo rwakakosha rwakaziviswa uye ndirwo rwunoratidza zvinogona kuve iyo AirPods isina waya bhokisi, asi tichataura nezvazvo mune imwe nyaya. Mune ino, inguva yekuona nhau dzeshanduro dzakaburitswa uye kunyangwe chiri chokwadi kuti hakuna kuwanda padanho remabasa, zvigadziriso zvebug zvakanyanya kukosha kudzivirira kutyisa kana uchivhura vhezheni dzekupedzisira.
Apple iri kutevera maviri-vhiki kuburitsa pateni uye inogona ikozvino kutora vhiki kana maviri kubva saka yazvino beta yevagadziri inogona kuve beta 6, iyo yaizosvika pakupera kwaAugust. Mushure meizvi isu tichafanirwa kuve neApple chiitiko umo mavanoburitsa zviri pamutemo iyo nyowani iPhone, iyo inonzi AirPods bhokisi, iyo AirPower uye pamwe zvimwe zvimwe zvinoshamisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 5 uye tvOS 12 beta 5 dzakaburitswawo nezuro kune vanogadzira
Gadzirisa zvirongwa zveAirPod paMac
Pwanya, mutambo weavo vanofarira kuputsa zvidhinha